kushandura xR Drives Alok's Dynamic 'Alive' Mumhanzi Special Live Streamed muBrazil | NAB Ratidza Nhau | 2021 NAB Ratidza Media Partner uye Mugadziri weNAB Ratidza LIVE. Broadcast Injiniya Nhau
musha » Featured » disguise xR Drives Alok's Dynamic 'Alive' Mumhanzi Special Live Inotepfenyurwa muBrazil
disguise xR Drives Alok's Dynamic 'Alive' Mumhanzi Special Live Inotepfenyurwa muBrazil
Iyo hombe yekuBrazil inorarama DJ show muna 2020 yakaitika muXR, sezvo DJ yemuno uye muimbi Alok akwezva vanhu mazana manomwe nemakumi mashanu 'Mupenyu' rukova muna Zvita, zvakare wachi inowona mamirioni manomwe maonero paYouTube. Kuvanza xR kufambiswa kwemabasa kwakafambisa mimhanzi yakakosha ne vx 4 media server uye maviri rx mapuratifomu achigonesa iyo show kuisa zvinhu kubva kunotungamira kupa injini Unreal, Kubatana uye Notch.
Alok ndiyo imwe yeakakurumbira mifananidzo muBrazil yemagetsi mimhanzi. Akatumidzwa ne Forbes Brasil semumwe wevanhu vane mukurumbira pasi pemakumi matatu munyika. Kutevera kudzimwa kwezviratidziro zvake zvese zvegore rapfuura, chinangwa cheiyo xR mhenyu rukova kwaive kuunza nzira nyowani yekutepfenyura mashandiro emuartist kune yake huru fanbase.
Project Director Director Fabio Soares kubva OkeStudio pamwe neTheForce yakakoka Sao Paulo-based, yakazara-sevhisi kambani yeAV Maxi kupa xR kufambiswa kwebasa kwechiratidziro, pamwe nekuvanza nyanzvi yekufambisa basa Tito Sabatini pane rutsigiro rwehunyanzvi. Iwo akasarudzika akanyudzwa Alok mune ine simba, inogara ichichinja nharaunda ine masango ane mavara eiyo stylized howa nemiti, galactic particle hova, synapses, shimmering ice shards, maguta anovaka nekunyungudika.
Tsigiro kubva pakuzvivanza "chaive chinhu chatisingakwanise kurarama tisina," Jose Augusto Martins, Executive Director kuMaxi, anoshuma. “Nepurojekiti hombe yakaita seiyi nevashandi vese vetekinoroji vachidzidza kushandisa xR, rutsigiro rwekuzvivanza rwaive rwakakosha. Izvo zvakatipa isu chivimbo chekumhanyisa zvinhu nemazvo. Taida kuti vanhu vanzwe simba rechiratidzo chaicho uye izvo zvakawanikwa.
"'Alive' yaive chirongwa chakakura cheXR, uye tanga tichichiita kekutanga muBrazil, saka takadzidza zvakawanda panguva yekuita kuti chirongwa chiitike," Jose anowedzera.
Maxi ndiyo yega kambani yekurenda ine turu yekushandisa kuendesa kugadzirwa kweXR, anodaro. Sezvo chidimbu chehunyanzvi chaida kushandiswa kweatatu makiyi ekupa injini Unreal, Kubatana uye Notch, pamwe nekushandura makamera akawanda nemakamera mana akateedzerwa achishandisa iyo Estabili yekutsvagisa system, kuvanza ndicho chete chishandiso chinokwanisa kuendesa pfupi, Tito anotsanangura. "Iyo inopa agnostic uye inogona kubata akawanda kamera kuchinjisa, timecode inotevera DJ cues uye nezvimwe."
Chikwata cheMaxi chakatarisana neyakaomeswa nguva yekudzidza mapaipi kune ese matatu ekupa mainjini uye nekumisikidza kuteedzera kwemakamera mana, ukuwo uchibatsira munhu wese anobatanidzwa kuti anzwisise xR kufambiswa kwemabasa uye kuti inogadzira sei kugadzirwa chaiko.
"Ichi chaive chigadzirwa chakakura, uye kuzvipira kwemunhu wese aibatanidzwa kwakaita kuti zviitike," anodaro Tito. “Mushure mekuratidzwa, maneja weAlok nevashandi vake vakashushikana, vakasununguka uye vakafara. Veruzhinji mhinduro yaishamisa futi; vanhu vanobva muindasitiri muBrazil vakauya kuzotikorokotedza, uye ndiwo mufaro wandaive nawo mushure megore rakaipa kudaro muindasitiri yemimhanzi. ”
Jose anotenda kuti xR ine ramangwana rakajeka mumusika wemumhanzi unorarama, kuunza varatidziri uye maartist kune chero nharaunda angangofungidzira. "Ini ndinofunga iyi tekinoroji inoita kuti munhu wese ati, 'Wow!'" Maxi atobaya imwe xR gig kubva pakarenda sezvo rapper Criolo akararama akatenderera konzati yakakosha muExpended Reality musi wa 23 Ndira.
Kugadzira Director: Fabio Soares
Executive Mugadziri: Fernanda Padrão
xR pfungwa: OkeStudio uye TheForce
xR Yemukati Director: Dejumatos
xR technical Directors: Tito Sabatini naGabriel Weckmuller
Iyo yekuvanza tekinoroji chikuva inogonesa vehunyanzvi uye vehunyanzvi nyanzvi kuti vafungidzire, vagadzire uye vanunure anoshamisa ehupenyu zviitiko zvekuona padanho repamusoro.
Kubatanidza chaiyo-nguva 3D visualization-yakavakirwa software ine yakakwira performance Hardware, kuvanza kunounza akaoma ekugadzira mapurojekiti pachiyero uye nechivimbo. Yayo nyowani yekuhwina mubairo Yakawedzerwa Reality (xR) kufambiswa kwemabasa kuri kupa vashandisi kuunza kuhupenyu zvinonyudza zviitiko zvinoonekwa zvinokurudzira nekubata vateereri vari kure kwese kwese.
disguise xR yatopa simba yekunyudza chaiyo-nguva zvigadzirwa zvevaimbi vemimhanzi vakaita saKaty Perry naBillie Eilish, mabhizinesi emabhizimusi akaita seSAP neLenovo, masangano ezvidzidzo seYunivhesiti yeMichigan, nhepfenyuro dzeTV seMTV Video Music Awards uye America's Got Talent, commercial mhando senge Nike uye Under Armor uye zvimwe zvakawanda zvakaitika mune dzinopfuura nyika makumi matatu.
Iine anogara achiwedzera wepasirose mudiwa network uye achishanda padhuze neane tarenda ekuona ekugadzira uye matekinoroji zviitiko muhupenyu zviitiko, kutepfenyura kweTV, mafirimu, kushanya kwekonzati, theatre, kumisikidzwa kwakatemwa uye zviitiko zvemakambani uye zvevaraidzo, kuzvivanza kuri kuvaka chizvarwa chinotevera chekubatana. maturusi ekubatsira maartist uye matekinoroji kuona kwavo kuona.
Kuti uwane mamwe mashoko, tapota shanya www.disguise.one
Previous: Iyo Neve® 8424 Console Inounza Yakawedzera Kugadzikana Kune Mike Smith's Workflow
Zvadaro: Vakatakura muBhokisi Vanoshandisa Pocket Cinema Kamera 6K uye ATEM Mini Pro yeMTV Movie & TV Mipiro: Chikuru Kupfuura Nguva Yese